[ 6 hours ago ] Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Heshiiska Paul Pogba ee Manchester United iyo Qodobo kale	Suuqa kala iibsiga
HomeSuuqa kala iibsigaKooxda Liverpool oo dooneysa daafaca da,yarkaa ee kooxda Ajax
November 29, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Maanta 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay bixiso 27 milyan ginni si ay u hesho adeega daafaca dhexe ee Ajax Perr Schuurs marka suuqa kala iibsiga dib loo furi doono bisha Janaayo.
Iyadoo Joe Gomez iyo Virgil van Dijk ay labadoodaba xilli ciyaareedkandhaawacyo kaga maqan yihiin kooxda, Jurgen Klopp ayaa inta badan u isticmaalay Fabinho booskooda daafaca.
Si kastaba ha noqotee, khadka dhexe ee Mersyeside Reds ayaa haatan bilaabay inuu kala baxo, taasoo ka dhigeysa in tababaraha Jarmalka uu ka fiirsado waxyaabaha cusub ee lagu soo kordhiyay kooxda bartamaha xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay Corriere dello Sport, Merseyside Reds ayaa laga yaabaa inay la socoto xiisaha ay u qabaan mustaqbalka Dutch Schuurs.
21 jirkaan, oo kaliya 19 bilood ay uga hartay qandaraaskiisa haatan, wuxuu boos joogto ah ka helay daafaca Ajax ololahan.
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay dareensan tahay inay dalab 27 milyan oo ginni ah ay ku filnaan doonto inay ku hesho daafaca dhexe.
Dhanka kale, Liverpool ayaa wali ‘si dhab ah uga fikireysa’ saxiixa Ozan Kabak xilliga qaboobaha. Liverpool ayaa dhowr jeer lala xiriiriyay ciyaaryahanka Schalke.
Waxaa la ogsoon yahay in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Turkiga loo ogolaan karo inuu ka tago kooxda ka dhisan Bundesliga xilliga jiilaalka qiimo jaban oo gaaraya 25 milyan oo euro, sababo la xiriira arrimaha dhaqaale ee kooxda reer Jarmal xilligan. AC Milan ayaa sidoo kale loo arkaa inay la soo wareegeyso Ozan, laakiin kooxda ka dhisan Merseyside ayaa u muuqata inay kaga adkaan doonto.
Daafaca dhexe ee reer Turki wuxuu noqon lahaa xiddig dhameystiran siyaabo badan, isagoo tixgelinaya inuu weli yahay 20 jir, sidaas darteedna uusan fileynin inuu ciyaaro isbuuc kasta.